400ml Walmart Tena Ilaina Fantsitran-tsolika Kanada China Manufacturer
Description:Walmart diffuser Canada,Walmart Oil diffuser Canada,Walmart Tena Ilaina Fitrandrahana menaka Kanada
Home > Products > Scent diffuser > 400ml Walmart Tena Ilaina Fantsitran-tsolika Kanada
Na menaka dipoavatra, menaka lavender, na fifangaroana menaka be dia be, dia io volo miendrika hazo io dia hamandoana haingana ny fototry ny menaka ary hanome anao aromaterapy tsy misy fetra! Ity humidifier ultrasonic ity dia hampiely ny menaka ilaina miaraka amin'ny tombontsoa betsaka, hanaparitaka ny zavona manerana ny tranonao. Izy io dia amboarina amin'ny alàlan'ny dingana tsotra; atsangano fotsiny ny sarony, ampio rano amin'ny fampiasana kaopy fandrefesana (incl.) ary ampidininao ilay menaka ilaina (tsy tafiditra ao anatiny) .
Azonao atao ny mifehy ny haavon'ny hamandoana amin'ny alàlan'ny setroka ary izy io dia ahitana fameram-potoana misy fiasa, miaraka amin'ny fametrahana 1 ora, 3-ora, na 6 ora. Ny ampahany tsara indrindra dia izy io dia mpanala tsy manam-pahalalana sy portable! Mety hifanaraka tsara amin'ny takelakao na eo amin'ny lampihazo izany fa tsy mila toerana. Tsy ho tadidinao akory ny azy eo (izay mandra-pahavoazan'ny aromourapeutic anao!) Dia tonga amin'ny endrika kanto sy tsotra miaraka amin'ny hazavana jiro LED ny fofonaentin'ny fofona. Hifanaraka tsara amin'ny haingon-trano na maoderina na mahazatra, ny mpanam-bary amin'ny hazo dia manana safidy LED 7 azo isafidianana. Mamorona tontolo milamina sy mahasoa amin'ny fianakavianao miaraka amin'ity diffuser menaka manan-danja ity .
Fampidiran-tsarimihetsika tsy misy rano avy amin'ny solika raina Contact Now
Dikan-tsiran-tsolika feno menaka avy amin'ny usb Contact Now
Masinina misy menaka fofona menaka manitra 150ml Hotel Contact Now
Fanafody menaka rongony tsara indrindra fitaratra Aroma fitsaboana Contact Now
Walmart Universal Voaroy Ateraky ny menaka manitra fatratra Black Friday Contact Now
Ny vokatra tsy manam-paharoa Walmart essentielle diffuser Air Contact Now
Walmart diffuser Canada Walmart Oil diffuser Canada Walmart Tena Ilaina Fitrandrahana menaka Kanada Car diffuser Canada Walmart diffuser Clearance Marbra diffuser Canada Walmart diffuser solika menaka Scent diffuser Canada